Ngaba kuyinyani ukuba izizukulwana ezitsha zifunde kancinci? Uncwadi lwangoku
Ngaba izizukulwana ezitsha zifunde ngaphantsi?
UJuan Ortiz | | Iincwadi, Ilizwe ledijithali, Izaziso, Ezahlukeneyo
Okokuqala, Kuyimfuneko ukuba icace gca malunga neenqobo zokugweba zokuhlela isithuba ngasinye kwisizukulwana ngasinye ngokweminyaka yabantu. Olona luhlu lwamkelweyo namhlanje lubonisa ubukho bamaqela amakhulu amathathu ezizukulwana: isizukulwana X (esazalwa phakathi kuka-1960 no-1979), isizukulwana Y okanye millennials (owazalwa phakathi kuka-1980 no-1995) kunye no-Z (owazalwa emva ko-1995).
Ewe kunjalo, ayisiqwalaselo esikwaziyo ukushiya wonke umntu onwabile. Ezinye iingcali zenzululwazi yengqondo zanyanzelisa ukongeza iqela elitsha: isizukulwana T, ngokubhekisele kwabo bantu bazalwa emva ko-2010. Ke ngoko, kufuneka kuhlolisiswe iimpawu eziqhelekileyo kwisizukulwana ngasinye ukuphendula umbuzo wokuqala, «Ngaba izizukulwana ezitsha zifunde ngaphantsi?» Eyona nto ilula iya kuba kukucinga ukuba impendulo ngu "Ewe, bafunda kancinci", kodwa…
1 Millennials funda ngakumbi
2 Kutheni le nto uGen Z enokuthi anike okona kuXhaswa kokuPhezulu kwiNtengiso yeNcwadi yeDijithali?
2.1 Masingawenzi ngokubanzi
2.2 Iinethiwekhi kunye nefuthe lazo
2.3 Isizukulwana T.
Los millennials Funda ngokugqithisileyo
Jonga kuyakhohlisa. Kungalula kakhulu ukukholelwa ukuba iGeneration X, okanye oko kubizwa njalo umntwana boomer (owazalwa phakathi kowe-1946 nowe-1959) unomdla wokufunda, kodwa akunjalo. Nangona millennials baba sisizukulwana sokuqala ukuxhuma kwi-intanethi, benemilinganiselo ephakamileyo yokuziphatha kunye nentlalo, abazange bazishiye iincwadi eziphathekayo ukuze bathathe indawo yabo ngeetekisi zedijithali.
Ngokuchasene noko, ngokophando olupapashwe ngu Umhleli weNgcali waseMelika, ngexesha lowama-2019 ama-80% e- millennials funda incwadi nangayiphi na ifomathi, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-72 bafunde ikopi eprintiweyo. Isithuba esifanayo sithi Los millennials AmaMelika afunda umndilili wencwadi ezintlanu ngonyaka. Kananjalo, ngexesha lokufumana kwabo abazi kangako ngombhali njengoyilo, ixabiso kunye nesembozo.
Kwakhona, isizukulwana Y sidibanise ukufundwa kwi-Intanethi njengezinto zemihla ngemihla zobomi babo (Ezizimeleyo, 2016). Ayothusi le nto, ikhona amathala eencwadi edijithali anemathiriyeli eninzi kwaye anokuboniswana simahla. Ngenxa yoko, umndilili wokufunda veki nganye- kwezi millennials Uzalelwe kwiLatin America, umzekelo - udlula ngokulula iiyure ezi-6 ngeveki. Nangona izibuko ezinje ngeAmazon zingaxeli ukwehla okubonakalayo kwintengiso yeencwadi eziprintiweyo, iGeneration Z inokuluguqula ngokupheleleyo olu khetho.
Kutheni le nto uGen Z enokuthi anike okona kuXhaswa kokuPhezulu kwiNtengiso yeNcwadi yeDijithali?
Ngendlela elula kakhulu: abo bazalwa emva kowe-1995 ngokucacileyo banobuchwephesha ngakumbi. Ngokukwanjalo, babonisa ukubandakanyeka okukhulu kwimiba yendalo. Ke ngoko, Isizukulwana Z abantu bathanda ukujonga ukushicilelwa kweencwadi njengomsebenzi osetyenziswayo, ngokungeyomfuneko, ngokuchasene nokulondolozwa kwendalo.
Kodwa Oku akuthethi phantsi kwazo naziphi na iimeko ukuba amalungu esiGaba Z afunde kancinane xa kuthelekiswa nezinye izizukulwana. Hayi, ngokuba nenani elikhulu lababoneleli bemithombo yeendaba yolwazi oluhlaziyiweyo, i "Z-gen" inokuchitha ixesha elininzi ichitha ulwazi ... ukunyaniseka komxholo.
Iinethiwekhi kunye nefuthe lazo
Imeko yokunxibelelana kwezentlalo iye yagxininisa le meko ngenxa yesakhono sayo sokudibanisa abantu abanomdla oqhelekileyo, okhuthaza ukutshintshiselana ngakumbi ngolwazi. Ke, Iincwadi zedijithali okanye e-ncwadi iya kuba yeyona fomathi ikhethiweyo yabafundi ukusukela ngee-2020. Ukongeza, iya kuba ngumzuzu xa abo bazalwe emva kuka-1995 beya kuba neminyaka efanelekileyo kwinqanaba lezorhwebo. Ewe, nangona kubalulekile ukukhawulela loo nto incwadi ebonakalayo iyaqhubeka nokugqwesa kwidijithali ngokweentengiso kunye neencasa.
Ngokubhekisele kwisizukulwana T, kusekutsha kakhulu ukufumanisa ukuba iyakuba yintoni na imikhwa yokufunda yabantu abazelwe emva konyaka ka-2010. Ngokunjalo, kunzima kakhulu ukucacisa ukuba iza kuba yintoni impembelelo yorhwebo yeli qela kurhwebo lweencwadi. Aba ngabantu "Abazelwe ngesixhobo sokuchukumisa phantsi kwengalo", ikhathalogu ngokusebenzisa ii-algorithms eziyilelwe ukuthanda izinto kunye nezinto ozikhethayo (Amakhonkco - DW, 2019).
Okokugqibela, kufuneka kuthathelwe ingqalelo (ngokwe-BBVA portal, 2018) leyo Isizukulwana T ukusukela ngo-2016 ngaphezulu kwe-80% yeentsana ezinobukho be-intanethi. Ibandakanya imifanekiso yabantwana kwiinethiwekhi zonxibelelwano zezalamane, kunye neeprofayili zabo ezilawulwa ngabazali. Ngesi sizathu, umhlaba we-analog yindalo iphela engaziwa kubo ... ngelixa uxhulumaniso yinto "eqhelekileyo nekhoyo ngoku".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ngaba izizukulwana ezitsha zifunde ngaphantsi?
Iposi elungileyo. Idatha, ubukhulu becala ivela e-USA, ndicinga ukuba inokudluliselwa kwi-EU. Kuyinyani ukuba bafunda ngakumbi, kodwa ngabuphi umgangatho?
Ukukhululeka kokushicilela ngokwakho kukhokelele kumawaka ezihloko kunye nababhali abatsha abasebenzisa ithuba lokutsala. Kwimarike ungabona umgangatho omdaka wohlelo, uyilo, izilungiso, nayo yonke into ishiya inqweneleka.
Ndicinga ukuba inika elinye inqaku. Masithembe ukuba iyabaleka le nto. Ukubulisa.
Ukungafi iDracula. Ubuso obu-7 bevampire nguBram Stoker